ဘောလုံး အထူးအစီအစဉ်များ | Telenor Myanmar
တယ်လီနော အသုံးပြုသူများ အတွက်
အထူး ဒေတာစုဘူး အစီအစဉ်များ
၆၉၉ ၄၀၀ မီဂါဘိုက် *၉၇၉*၁၀၀*၁#
၈၉၉ ၆၆၅ မီဂါဘိုက် *၉၇၉*၁၀၀*၂#
၃,၂၂၉ ၂.၅ ဂစ်ဂါဘိုက် *၉၇၉*၁၀၀*၃#
၆,၄၅၀ ၅ ဂစ်ဂါဘိုက် ၉၇၉*၁၀၀*၄#
၁၁,၂၉၉ ၈.၅ ဂစ်ဂါဘိုက် *၉၇၉*၁၀၀*၅#
၁၇,၇၄၉ ၁၃ ဂစ်ဂါဘိုက် *၉၇၉*၁၀၀*၆#
သက်တမ်း : ရက် ၃၀
ဒေတာ : ၈ကျပ် / မီဂါဘိုက်
နိုင်ငံတွင်း : ၁,၂၀၀ ကျပ်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ : ၂,၀၀၀ ကျပ်
နိုင်ငံတကာသို့ : ၂,၅၀၀ ကျပ်
လက်ခံရရှိခြင်း : ၁,၀၀၀ ကျပ်
စာတို : ၅၀၀
တယ်လီနောရဲ့ ဘောလုံးဝါသနာအိုးများအတွက် အထူးအစီအစဉ်များ လာပါပြီ!
အသင့်အတင့် အင်တာနက် သုံးစွဲခြင်းများ အတွက်
၂ဦး (သို့) ၃ဦး
MDUs များအတွက် အခမဲ့
အသင့်အတင့်မှ တခါတရံ အင်တာနက် အများအပြား သုံးစွဲခြင်းများ အတွက်
၃ဦး (သို့) ၅ဦး
ပုံမှန် အင်တာနက် အများအပြား သုံးစွဲခြင်းများ အတွက်
၅ဦး (သို့) ၁၀ဦး
ဇွန်လ ၁၀ရက် မှ ၂၀ရက် အတွင်း ရယူသူများအတွက် ၇ရက်အခမဲ့ (ပထမဆုံးအကြိမ်အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။)
ယခု အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် ၂၅၀ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး ၇ရက်သက်တမ်း ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ် ဆိုတာက ဘာလဲ?
ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ်မှာ အင်တာနက်ဒေတာအသုံးပြုနိုင်မယ့် အထူးအစီအစဉ်သစ် တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းကာလမှာ ရက် ၃၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲများ ကျင်းပချိန်ကာလအတွင်း ဒေတာအသုံးပြုမှုအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး မိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ အစီအစဉ်အားလုံး၏ သက်တမ်းကာလမှာ ရက် ၃၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအစီအစဉ်မှာ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ (၁၂) ရက်မှ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်အတွင်း ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ USSD မှ တဆင့်သာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အစီအစဉ်နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နေ့မှာ ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ် ၀ယ်ရင်ကော ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ?
ဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှာ ၀ယ်ယူခဲ့ပါက ၀ယ်ယူသည့်ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ်၏ သက်တမ်း ကာလမှာ ထိုနေ့မှ နောက်ထပ် ရက် (၃၀) အထိ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ်ကို ထပ်မံရရယူနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါ။
ဘောလုံးဒေတာဆိုတော့ ဘောလုံးနဲ့ပတ်သတ်တာပဲ အင်တာနက်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်မှာလား ဒါမှမဟုတ် ဘယ်အင်တာနက်သုံးသုံး သုံးလို့ရနိုင်မှာလား?
ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ်မှာ အခြားပုံမှန်ဒေတာအစီအစဉ်များကဲ့သို့ မည်သည့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်မဆို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘောလုံးဒေတာကို အကြိမ်ကြိမ်ဝယ်ယူခဲ့ရင်ကော ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ?
ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ်ကို အကြိမ်ကြိမ်ရယူခဲ့ပါက ဒေတာပမာဏများမှာ ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကာလမှာ အစီအစဉ်ကို နောက်ဆုံးရယူ ခဲ့သည့်နေ့မှ ရက် (၃၀) အတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စုဘူးဒေတာအစီအစဉ် လက်ကျန်လည်းရှိတယ်။ ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ်လည်း ထပ်ယူခဲ့ရင် အစီအစဉ် ၂ ခုလုံးမှာ ရှိတဲ့ ဒေတာတွေက ပေါင်းသွားမှာလား?
ဒေတာစုဘူးနှင့် ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ်မှာ မတူညီသော အစီအစဉ် ၂ ခု ဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် ဒေတာပမာဏများမှာ ပေါင်းစည်းသွားမှာမဟုတ်ဘဲ သီးသန့် လက်ကျန်စာရင်း ၂ ခုအဖြစ် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာအသုံးပြုမှုအတွက်မူ ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ်နှင့် ဒေတာစုဘူးအစီအစဉ် တွင် ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ်မှ ဒေတာများကို အရင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ်မှာရော စုဘူးဒေတာအစီအစဉ်လိုမျိုး ဒေတာသက်တမ်းပမာဏတိုးမြှင့်ခွင့် ရရှိနိုင်မှာလား?
မရရှိနိုင်ပါ။ ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ်တွင် ဒေတာသက်တမ်းပမာဏတိုးမြှင့်ခွင့် ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်ဒေတာအစီအစဉ်များအတိုင်း သက်တမ်းကာလ ကုန်ဆုံးချိန်တွင်း လက်ကျန်ဒေတာများကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါ။
ဘောလုံးဒေတာအစီအစဉ်၏ လက်ကျန်စာရင်းနှင့် သက်တမ်းကာလကို ဘယ်မှာကြည့်ရှုလို့ရနိုင်လဲ။?
ရရှားနိုင်ငံအတွက် တယ်လီနောရဲ့ Roam Like Home
ယခုအစီအစဉ် ကို အသုံးပြုလိုလျှင် အပတ်စဉ်ကြေး (သို့်) လစဉ်ကြေး နှင့် အသုံးပြုခွင့် မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
အပတ်စဉ်ကြေး (သို့်) လစဉ်ကြေး နှင့် အသုံးပြုခွင့် မှတ်ပုံတင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ အခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကတော့ စျေးနှုန်းမပြောင်းလဲပါ။
ယခု အစီအစဉ်ရဲ့ အထူးစျေးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ?
တစ် မီဂါဘိုက်လျှင် ၈ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
တစ် မီဂါဘိုက်လျှင် ၁၅,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့် အချိန်တွင် ယခုအစီအစဉ် စတင်သလဲ?
ဇွန်လ ၁၄ရက် ၂၀၁၈ခုနှစ် တွင် စတင်ပါတယ်။
မည်သည့် အချိန်တွင် ယခုအစီအစဉ်ကုန်ဆုံးမလဲ?
ယခုအစီအစဉ်ကို အခြားဒေသများတွင်ပါ အသုံးပြု၍ ရနိုင်သလား ?
မရနိုင်ပါ။ ရရှားနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ယခု အစီအစဉ်သည် postpaid သို့ prepaid နှစ်ခုလုံးအတွက် အသုံးပြု၍ရနိုင်မလား ?
ယခု အစီအစဉ်သည် postpaid သို့ prepaid နှစ်ခုလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တယ်လီနောရဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့ Broadband အင်တာနက်
ဤနေရာသို့ နှိပ်၍ တယ်လီနော broadband အင်တာနက်အကြောင်းကို အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပါပြီ။